Famaizana tany Bekopaka : Trano fandraisam-bahiny iray kilan’ny afo -
AccueilSongandinaFamaizana tany Bekopaka : Trano fandraisam-bahiny iray kilan’ny afo
Famaizana tany Bekopaka : Trano fandraisam-bahiny iray kilan’ny afo
Doro tanety tsy voafehy. Io no fantatra fa nitarika firehetana, ary nahakasika trano fandraisam-bahiny malaza antsoina hoe Olympe de Bemaraha, any amin’ny fokontany Bekopaka, distrikan’Antsalova.
Trano fandraisam-bahiny iray be mpitsidika sy mpanofa eo akaikin’ny Tsingin’i Bemaraha ity nomena anarana hoe « Restaurant Olympa » ity, izao niharan’ny famaizana tany an-toerana vokatry ny fihitaran’ny doro tanety izao. Ny harivan’ny alarobia lasa teo, tokony ho tamin’ny 5 ora sy 15 minitra no nitranga izany. Efitrano maromaro no fantatra fa may nandritry izany, izay nahitana trano fandraisam-bahiny iray lehibe fikarakarana sakafo, trano fivoahana, birao hatrany amin’ny terasy. Teo ampitan’ity toeram-pandraisam-bahiny ity no nisy io doro tanety io. Tsy voafehy ny afo noho ny fitsokan’ny rivotra mafy ary nanome pitik’afo. Vetivety foana dia niparitaka ny afo noho izany, ka nananika ny trano. Manoloana izany, nahitana fahasimbana sy fahavoazana betsaka tao amin’ity trano ity.
Nitaraina moa ireo mponina fa taraiky ny fahatongavan’ireo mpamonjy voina, ka izay no isan’ny nahasarotra ny famehezana ny afo. Nitondra fanazavana kosa anefa ny teo anivon’ny mpamono afo ao amin’ity toerana ity fa taraiky loatra ny fampandrenesana azy ireo. Teo ihany ny famonjena nataon’ny mponina teny amin’ny manodidina, saingy tsy nahasakana ny fijoalajoalan’ny afo nahakasika ilay trano fandraisam-bahiny lehibe.
Tonga tao an-toerana ny mpitandro filaminana nanao ny fanadihadihana sy ny fitsirihana tamin’izany. Na dia teo aza izay zava-niseho izay dia tsy nisy ny aina nafoy na ny naratra, saingy tsy nisy azo noraisina kosa ireo entana rehetra fa levon’ny afo avokoa. Naharitra ora maro teo ho eo ihany koa ny namonoana ny afo. Efa misokatra kosa ny fanadihadiana eo anivon’ny zandarimariam-pirenena mahakasika ny fikarohana izay tompon’antoka. Hatreto, mbola tsy fantatra mazava ny hadirin’ny fahavoazana naterak’ity ny doro tanety ity.
Famatsiana herinaratra ny tontolo ambanivohitra, mitohy ny fitokanana ataon’ny Filoham-pirenena. Tany amin’ny tanàna antsoina hoe Ambatokelivava, kaominina Amboasary Avaratra, any distrikan’Anjozorobe indray no nametrahana ny fotodrafitrasa vaovao famatsiana herinaratra nitokanan’ny Filoha Rajaonarimampianina Hery ny faran’ny ...Tohiny